နယ်သာလန်ရှိနိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာရှေ့နေများ - Law & More
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်ရာဇ ၀ တ်မှုဥပဒေပါ ၀ င်သည့်အခြေအနေများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတော်တဆတိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်တစ် ဦး သည်အလွန်အကျွံသောက်ခဲ့သည့်အခြေအနေကိုစဉ်း စား၍ ကားမောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရက်စစ်ဆေးပြီးနောက်အဖမ်းခံရလျှင်သင့်တွင်ပြaနာရှိသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်သင်သည်ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ဆင့်ခေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်သည်။
ဆက္သြယ္ရန္ LAW & MORE
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်ရာဇ ၀ တ်မှုဥပဒေပါ ၀ င်သည့်အခြေအနေများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတော်တဆတိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်တစ် ဦး သည်အလွန်အကျွံသောက်ခဲ့သည့်အခြေအနေကိုစဉ်း စား၍ ကားမောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရက်စစ်ဆေးပြီးနောက်အဖမ်းခံရလျှင်သင့်တွင်ပြaနာရှိသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်သင်သည်ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ဆင့်ခေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်သည်။ အခြားအဖြစ်များသည့်အခြေအနေတစ်ခုမှာမသိနားမလည်ခြင်းသို့မဟုတ်သတိမဲ့မှုကြောင့်ခရီးသည်အိတ်များတွင်အားလပ်ရက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ရန်ပုံငွေများမှမှားယွင်းစွာဖော်ပြသောတားမြစ်ထားသောဆောင်းပါးများပါ ၀ င်သည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေဤလုပ်ရပ်များ၏ဆိုးကျိုးများမှာကြီးမားပြီးပြစ်မှုဆိုင်ရာဒဏ်ငွေမှာယူရို ၈,၂၀၀ အထိအထိမြင့်တက်နိုင်သည်။
quick Menu ကို
လုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးရာထူးကြောင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်လည်းရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ အရည်အချင်းရှိသောအာဏာပိုင်များကစစ်ဆေးပြီးနောက်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုသံသယရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်စီးပွားရေးလောကတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်ခြင်းကိုမသိဘဲဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးဆက်များဖြစ်စေနိုင်ပြီးဒဏ်ငွေများစေနိုင်သည်။ သင်သည်ဤသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ရောက်နေသလားသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်သလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြစ်မှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ Law & More.
+31 (0) 40 369 06 80 ကိုခေါ်ပါ
Law & More တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့အထိရနိုင်သည်
မနက် ၈း၀၀ မှ ၂၂း၀၀ နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့များဖြစ်သော ၀၉း၀၀ မှ ၁၇း၀၀ အထိ
ထောက်ခံ Law & More
ထို့အပြင်သင့်အား“ သားကောင်” ရှုထောင့်မှရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်မှတဆင့် ၀ ယ်ယူမှုများပိုမိုပြုလုပ်သည်။ များသောအားဖြင့်အားလုံးကောင်းသွားပြီးသင်မှာထားသမျှကိုရတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မှားယွင်းတတ်သည်။ သင်သည်တယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ်လက်တော့ကဲ့သို့သောအရာများအတွက်သင်ငွေအမြောက်အမြားပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းရောင်းချသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သည့်အခါကမျှမပို့ဆောင်ရသေးပါ။ ပြီးနောက်သင်၏ပစ္စည်းမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုအကြောင်းကြားလိုပါကရောင်းချသူကိုမည်သည့်နေရာတွင်မျှရှာတွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကိစ္စတွင်သင်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခံရသူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမတော်တဆကြုံတွေ့ရသည့်အခြေအနေမျိုးတွင်ကျွမ်းကျင်သူရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည် Law & More။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပြlaw္ဌာန်းသည့်အဖြစ်အပျက်တိုင်းသည်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ At Law & More ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပြုမူမှုများသည်သင်၏ဘဝအပေါ်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်၏ပြproblemနာကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာဖြေရှင်းရန်အာရုံစိုက်သည်။ မှာပြစ်မှုဆိုင်ရာရှေ့နေများ Law & More သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါနယ်ပယ်များတွင်ဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့များပေးလိုပါသည်။
၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေရှေ့နေများ၏ကျွမ်းကျင်မှု Law & More
ယာဉ်မောင်းတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူကိုရှောင်ရမည်။ အသွားအလာတွင်အရက်အလွန်အကျွံသောက်သည့်အခါထိုသို့သောအပြုအမူမျိုးဖြစ်သည်။ လူတို့သည်အလွန်အကျွံသောက်ပြီးနောက်ကား၏ဘီးနောက်ကွယ်တွင်မှန်မှန်ရကြသည်။ သင်သည်အရက်စစ်ဆေးပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခံရခြင်းသို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ဆင့်ခေါ်ခြင်းကိုခံနေရပါသလား။ ထိုအခါကျွမ်းကျင်သူရှေ့နေတစ် ဦး နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ပံ့ပိုးခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ အမှန်မှာအရက်၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ကားမောင်းခြင်းသည်ပြင်းထန်သောပြစ်ဒဏ်များဖြင့်ထောင်ဒဏ်သုံးလအထိဒဏ်ခံရနိုင်ပြီးဒဏ်ငွေယူရို ၈,၃၀၀ နှင့်သင်ကားမောင်းခြင်းကိုဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။ သို့သော်စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်နေစဉ်သို့မဟုတ်အရက်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းရဲနှင့်တရားရေးအာဏာပိုင်များမှစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရက်စစ်ဆေးမှုတွင်ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားမပြသနိုင်သည့်အပြင်၊ အချို့ကိစ္စများတွင်ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ကားမောင်းခြင်းရပ်ဆိုင်းခြင်းမသက်ရောက်ပါ။ Law & More အသွားအလာရာဇ ၀ တ်မှုဥပဒေတွင်ကျွမ်းကျင်သောရှေ့နေများရှိပြီးသင့်အားအကြံဥာဏ်များ ပေး၍ သို့မဟုတ်တရားစွဲဆိုမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်သင့်အားပျော်ရွှင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်ပေါ်တွင်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမောင်းနှင်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက အသွားအလာ website.
သင်နယ်သာလန်သို့သွားသောအခါအကောက်ခွန်ကိုသင်ဖြတ်သန်းသည်။ ထိုအချိန်တွင်သင်သည်တားမြစ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်ရန်သင့်ကိုခွင့်မပြုပါ။ သင်၏အဝိဇ္ဇာသို့မဟုတ်ဂရုမစိုက်မှုကြောင့်အကောက်ခွန်အာဏာပိုင်များကတားမြစ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုတွေ့ရှိပါကရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်။ သင်၏နိုင်ငံသည်ဤနိုင်ငံတွင်သြဇာသက်ရောက်ခြင်းမရှိပါ။ အများဆုံးဖြစ်နိုင်ဆုံးနှင့်ဘုံပိတ်ဆို့မှုဒဏ်ငွေဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဒဏ်ငွေတစ်ခုရပြီးသင်သဘောမတူပါက၎င်းကိုဒတ်ခ်ျအစိုးရရှေ့နေရုံး၌နှစ်ပတ်အတွင်းကန့်ကွက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဒဏ်ငွေကိုချက်ချင်းပေးဆပ်ပါကသင်သည်အကြွေးတင်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ရှေ့နေနှင့်တိုင်ပင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများအဖွဲ့သည်ကျွမ်းကျင်သောဗဟုသုတများရရှိပြီးမည်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်မဆိုသင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်။ သင်အကူအညီလိုပါသလားသို့မဟုတ်အခြားမေးခွန်းများရှိပါသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပါ Law & More။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်တွင်တားမြစ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်ခြင်း၏အန္တရာယ်နှင့်အကျိုးဆက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက - 'ဒတ်ခ်ျအကောက်ခွန်'.
ယနေ့ခေတ်တွင်ကုမ္ပဏီများသည်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ပိုမိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်အခွန်စည်းကြပ်မှုမမှန်ကန်ကြောင်းသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်သည်ဟုသံသယရှိနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များသည်ရှုပ်ထွေးပြီးကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရှေ့နေနဲ့ချက်ချင်းတိုင်ပင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူရှေ့နေတစ် ဦး သည်သင်၏တာ ၀ န်များကိုဖော်ပြခြင်းသာမကအခွန်အာဏာပိုင်များအားသတင်းအချက်အလက်ပေးရန်တာ ၀ န်ကိုဖော်ပြရုံသာမကနှုတ်ဆိတ်နေခွင့်ကဲ့သို့သော (ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်) သင်၌ရှိသောအခွင့်အရေးများကိုမချိုးဖောက်ရန်သေချာစေလိမ့်မည်။ သင်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပါသလား။ သင်၏အခြေအနေတွင်အကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီလိုအပ်ပါသလား။ သင်အားကိုးနိုင်သည် Law & More။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကုများသည်ပညာရှင်ဆန်သောချဉ်းကပ်မှုရှိပြီးသင့်ကိုနောက်ထပ်မည်ကဲ့သို့ကူညီနိုင်မည်ကိုသူတို့သိသည်။
အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ ဥပမာသင်သည်အင်တာနက်ပေါ်မှကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ယူသောအခါ၊ ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးဘယ်သောအခါမှမရရှိခဲ့ပါကပြစ်မှုဆိုင်ရာလိမ်လည်မှု၏တရား ၀ င်လက္ခဏာများမရှိဘဲ၊ လိမ်လည်မှုသည်တရား ၀ င်သဘောအရရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်ရန်အတွက်ရောင်းသူသည်ရောင်းရန်တစ်ခုခုအသုံးပြုသည်မှာမှားယွင်းသောစကားသို့မဟုတ်မုသာများရှိရမည်။ လိမ်လည်မှုကိုဥပဒေအရအခြားသူအားငွေကြေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပို့ဆောင်ရန်မည်သည့်အရာကိုမဆိုပေးပို့ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟုဖော်ပြထားသည်။ ငါတို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေများကိုဆက်သွယ်ပါ။ Law & Moreရှေ့နေများသည်ကိုယ်ပိုင်ချဉ်းကပ်မှုရှိပြီးသင့်အခြေအနေနှင့်သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။
ထို့နောက်ဖုန်းနံပါတ် +31 (0) 40 369 06 80 ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
မစ္စတာ။ တွမ် Meevis, မှာထောက်ခံသူ Law & More - [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မစ္စတာ။ Maxim Hodak, at & More မှထောက်ခံသူ - [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]